Unlock HTC Ọchịchọ gị n'efu! | Gam akporosis
el_iulius | | HTC, Nkuzi
Los chicos de Ndị mmepe XDA agaala ije ozo ma nweta uru nke mere na anyi nwere ike hapụ anyị HTC Desire n'ụlọ, na-enwe obere nsogbu na free Server gbalịrị ya, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na nke mbụ ugboro ise ọ hapụghị ya, oge nke isii ọ bụ amara. Nzọụkwụ ị ga - agbaso bụ:
Anyị na-aga XDA biputere y anyị na-ebudata ihe oyiyi nke cd nke na-egosi anyị na nkọwa mbụ.
Dekọọ oyiyi ahụ na CD. Agụwo m ndị ọrụ ji ya VMWare ma ọ bụ Igbe Virtual buut na ISO. Ọtụtụ nwere nsogbu na njikọ USB na ọnụ ya. Ọ bụrụ na ịmara otu esi ahazi ya, gaa n'ihu.
Anyị na-ewebata CD na kọmpụta anyị, anyị na-amalite (Ọ bụrụ na ịmee ya site na igwe arụmọrụ, ị ga-ahazi ya ka ọ malite site na ISO).
Anyị na-eche maka kọmputa ka ọ gwa anyị ka anyị jikọọ ekwentị site na USB. Mgbe ọ gachara, Ọchịchọ anyị ga-adị n ’ọnọdụ AKWOTKWỌ, nke ahụ bụ, site na ịpị bọtịnụ Vol - na bọtịnụ Ike n'otu oge.
Anyị na-ejikọ ma na-edebe ihe ọ na-etinye na kọmputa anyị. Ha abụọ ga-amalitegharịa mgbe ọrụ ahụ gwụchara.
Ọ dị mkpa inwe a AKWOTKWỌ 0.93.1000 na redio 5.14.05.17 nke bụ ndị na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke usoro ahụ (enwere m ihe abụọ achọrọ ma enweghị m ihe ọ bụla na-atụghị anya ya). Maka inwe Root na S-Off Anaghị m agụ ma ọ bụ nke abụọ a chọrọ ebe ọ bụla, ọ bụ ezie na mgbe ọ bụla a na-arụ ọrụ nke caliber a, a na-atụ aro ha abụọ, ebe ọ bụ na, enwere nsogbu, ọ dị mfe iji weghachite ọnụ.
na XDA biputere na nke HTCManía ha na-ekwupụta chinchi iji mee ka akụrụngwa dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi. N'ezie, ọ dị mma ịnwale ọnụ mgbe usoro ahụ dum gasịrị, iji nyochaa na enwebeghị nsogbu. Ọ na-aga n'ekwughị na onye ọ bụla na-ahụ maka njedebe ha na kọmpụta ha, na ndị okike enweghị ọrụ maka nrụrụ.
Ana m ahapụrụ gị vidiyo nke ụmụ nwoke HTCMania na usoro dum.
A gbara gị ume?
Hụrụ na: XDA
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Unlock HTC Ọchịchọ gị n'efu!
Ihe 64 kwuru, hapụ nke gị
Ọma nwalere !!!
Daalụ nke ukwuu!! Ekwesịrị m ịga na htc mania forum n'ihi na njikọ XDA dị ala.
gbaghara amaghị ama ,, ma ụnyaahụ m nyere m wank na m fesara mmiri ara ehi na ihuenyo, nke ahụ bụ ihe ọjọọ, ọ akpọnwụwo na m na-agbalị iji hichaa ya na ihe niile na e nweghị ụzọ m nwere ike ime ya?
Enweghị m ụdị HBoot ahụ ọ rụpụtara m oge mbụ.
Ọ na-arụ ọrụ maka vodafone nexus?
Ndewo, daalụ maka ịkọ akụkọ, mana na-enweghị iwe, echere m na ị kwesịrị ịgụ ihe nke ọma ..
M na-ekwu site na ederede ederede XDA mbụ:
«Ngwa ahụ anaghị achọ mgbọrọgwụ ma ọ bụ s-apụ ma rụọ ọrụ na hboot ọ bụla na ụdị redio. (a nwalela ya ruo ugbu a na HBOOT ruo 0.93.1000 na RADIO ruo 5.14.05.17). »
"Ngwa ahụ achọghị mgbọrọgwụ ma ọ bụ s-apụ ma ọ ga - arụ ọrụ na ụdị ọ bụla nke hboot na redio (A nwalere ya ugbu a na HBOOT ruo 0.93.1000 na redio ruo 5.14.05.17"
Ya mere, ndị nwere ọchịchọ na HBOOT na redio nke nsụgharị ndị gara aga na tiori kwesịrị inwe ike ịmepe ekwentị ha site na iji usoro a.
Aga m aga ya ugbu a. Ana m agwa gị ma ọ rụọ ọrụ.
Ọ na-arụ ọrụ zuru okè m! M tọhapụrụ m Ọchịchọ maka 5 nkeji… .. na n'efu!
Ekwesịrị ikwu na weebụsaịtị ahụ na ọ ga-arụ ọrụ na hboot ọ bụla na ụdị redio ọ bụla, yana ịchọghị mgbọrọgwụ iji ngwa a.
Agbalịrị m ịmeghe ya site na IMEI mana ha na-agwa m mgbe niile na ha enweghị ike ịchọta koodu maka otu m.
Enwere m ike ịsị… Daalụ! Daalụ! Daalụ!
M depụtaghachiri faịlụ ahụ na CD ma m nwetara folda na-ekwu buut mana ọ naghị amalite m,
Enwerem windo xp, amaghim ebe nsogbu a di.
Zaghachi na ndị ọzọ
Ọfọn, ị ga-amalite kọmputa na cd n'ime. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị buut si cd, ị ga-gbanwee bios
Enwere m ọchịchọ HTC bụ movistar mana m na-etinye kaadị vodafone na WhatsApp ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ mana enweghị m ike ịkpọ ma ọ bụ nata oku, agbalịrị m ime ihe ọ na-agwa m n'elu, mana m tinye CD ahụ na PC m na PC na-edebe ihuenyo na nwa na mgbe a mgbe ọ na-amalite nkịtị
You nwere ike inyere m aka?
mgbe maka X10?
Ọ rụworo m ọrụ mgbe m gbalịrị ọtụtụ oge. Akwa, daalụ maka ntuziaka.
Ma n'aka nke ọzọ, njikọ 3G anaghị arụ ọrụ m ... ma amaghị m ma ọ bụ n'ihi nke a ... ... ebe ọ bụ na m nwalere sim m, na ekwentị ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Mmetụla nhazi, iji họrọ onye ọrụ ọzọ, mana ọ nweghị ihe ọ bụla. Aro ọ bụla?
Njikọ 3G bụ data? Ọ bụrụ na ọ bụ data ahụ, gaa na ntọala -> njikọ ikuku -> netwọkụ mkpanaka ma nyochaa na ihe niile dị mma. Data nyeere na APN bụ nke onye na-ahụ gị n'ọrụ. Ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụ mkpuchi 3G, chọpụta na nhọrọ "iji naanị netwọk 2G" arụ ọrụ
M wepụtara ya dị ka nke a ma enwere m data na ụlọ ọrụ na-etinye SIM na HSPA na 3G
Ọrụ magburu onwe ya, na vidiyo na ihe niile akọwapụtara nke ọma, daalụ maka ekele maka ihe niile, anaghị m ekwu okwu, dị ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe
Zaghachi Vicente Alcoba
Ekele el_iulius, n'ezie APN nọgidere na-ahazi ya.
Akpọrọ m 22155 site na Vodafone n'okwu a, na nkeji ole na ole ha gwara m otu esi ahazi ya. (Ọnụahịa nke oku n'agbanyeghị oge ole ọ dị 0,50 cents, ọ bụrụ na ị nwere mmasị)
Ndewo, nkwa ahụ furu efu?, M na-ekwu ya x ma ọ bụrụ na n'ọdịnihu ihe ọ bụla ga-eme ya, afọ abụọ m kpuchikwara m
I meela nke ukwuu maka nkọwa ahụ - enwekwaghị m olileanya - ọ bụ n'otu oge ahụ # 11 - mana ekpochila 0.93.0001 - redio 5.11.05.27 - Can nwere ike ibudata mmemme kompas maka ekwentị a? ekele .
Ndewo, enwere m ọchịchọ htc, m ga-achọ ịma ma m na-etinye ihe egwu ọ bụla site na ịhapụ ya n'ụzọ dị otú a: ya bụ, na peeji nke xda ọ na-ekwu na ọ bụrụ na ọ bụ cdms ekwentị anaghị atụ aro ịme ya n'ihi na ọ nwere ike mee ka mmebi a na-apụghị ịgbanwe agbanwe
ekwentị m bụ
Adroid 2.2 ụlọ ahịa
amaghi m ka esi ama apn na hbook ma o bu radio ... kedu ka esi eme ya ... ndo ma m bu onye new hehe ekele
Google Talk kwụsịrị ịrụ ọrụ m mgbe emechara ya. Nsogbu bu na obu ngwa kernel, ya mere ugbu a amaghi m otu esi eweghachite ya, ma obu tinye ya ozo, ma obu weghachite ya: -S
You na-ahụ mmezi ọ bụla, maka ịhapụ ya? Echere m, ọ na-aga ngwa ngwa, ma ọ bụ enwere mmụba ọhụụ ọ bụla? Ewezuga inwe ike itinye siml ọ bụla.
Zaghachi ka ealfnav
Ana m ekele gị nke ukwuu maka iwetara m ọchịchọ htc taa ma ewepụtala m ya ekele gị = D.
Ọ rụrụ ọrụ oge mbụ na nke ahụ bụ oge mbụ m na-ewere htc: P.
M ga-ewepu mmehie ahụ ruo na njedebe ?????? ekele enyi
Maka Desire HD ọ na-arụ ọrụ ka ọ bụ naanị ya na-achọ?
Nwere ike onye tinye njikọ na post na ajụjụ, ma ọ bụ njikọ na nbudata nke ihe oyiyi? O meela obere oge, enweghị m ike ịchọta ọkwa a na-ekwu ...
Nwere ike mmadụ tinye njikọ na post na ajụjụ ma ọ bụ njikọ na nbudata nke ihe oyiyi? Adịwo m oge ma enweghị m ike ịchọta ọkwa ahụ kwuru.
Zaghachi na aSaLtO
chọrọ ịma ma ọ nwere ike iji ya na vodafone ọchịchọ HD?
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu…
helpoooooo achọrọ m enyemaka
Edegola m ihe onyonyo ahụ na USB ma agbanyeghachiri kọmputa ma ọ naghị eme na de na, ọ bụrụ na m nọ na parlor eh!
n'ụlọ m nwere netbook Airis ma amaghị m ma ọ ga-ekwe ka m mee ya, ọ dị oke oke
ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na m ga - eme ihe ọ bụla mgbe kọmputa malitere ma wụnye ụfọdụ ngwanrọ maka ya
PS Ọ dị m nwute na m nọ n'okwu ndị a!
Gịnị bụ uru nke ịtọhapụ ekwentị? itinye SIM site na ụlọ ọrụ ọ bụla na maka ihe ọzọ? ịre ya oke ọnụ? XD
Onwere onye nwere ike ịgwa m ma ọ rụọ ọrụ maka ọkụ ọhịa?
Zaghachi ka zauken
Gịnị ka e kwesịrị inwe iji meziwanye ihe? Enwere m ya na anaghị m achọpụta ihe ọ bụla
Enwere m vodafone ọchịchọ z na froyo, ọ dị onye maara ma ọ na-arụ ọrụ?
100% na-arụ ọrụ na ọchịchọ m !!!!
Achọtara m ọchịchọ htc ma egbochi ya, a na-eji ntọhapụ a maka igbochi site na m
ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ na-eme ya na a mebere igwe? n'ihi na jisighi ike mee ya otu a!
Ọfọn, na-ewere ozi site na ebe a na ebe ahụ, m banyere hboot
enwekwara m HBOOT 0.93.0001 kama HBOOT 0.93.1000
Mgbe ọ banyere, SIMLOCK pụtara na njedebe nke dum, na-agagharị na igodo olu,
Abịara m ma jiri akara aka họrọ ya, otu ajụjụ bilitere (na Bekee doro anya)
chọrọ imeghe sim? maka ee pịa igodo olu, enyere m ya ma ekwentị malitegharia.
N’aghọtaghị ya, ejiri m oroma sim ahụ mee ya, ọ malitegharịrị wee tinye pin oroma
mgbe ahụ, m gbanyụrụ mobile ma tinye vodafone sim, tinye vodafone pin ma tinye:
mgbe ị na-abanye sim ọhụrụ, akwụkwọ ahụ aja na ntọala ga-agbanwe ... Amaghị m ihe ọzọ .... Ekwuru m nke ọma, ana m akpọ ekwentị ọzọ ma ọ na-arụ ọrụ, ya na kaadị vodafone.
M nwere jikọọ na mobile na pc, ma ọ bụ ihe ọ bụla na ihe niile, ihe niile si mobile.
Echere m na ekwentị m ga-enwe nsụgharị dị iche ma enwewo m ihe ịga nke ọma,
maka na ihe a putara nwa nwoke na abughi nke m
Enwere m olileanya na ị nwere otu obi iru m
Zaghachi HBOOT 0.93.0001
Emeela m ihe ị na-ekwu banyere hboot na ihe ndị a na-egosi:
Fat32 init dịkwa mma
emeghe MCCMNC faịlụ ida
emeghe faịlụ CID daa
Emechara usoro, regharịa ngwaọrụ?
Echere m na ọ ga-enwerịrị mmachi ọzọ, ọ bụ eziokwu maka na ọrụ ahụ agachaghị nke ọma m.
Have nweela ezigbo ihu ọma ...: _ (M, mba.
nke ahụ bụ ihe pụtara m, faịlụ 2 na-ada (faịlụ na ọdịda)
mana ka m kwuru ee
Emere m ya na kaadị oroma, (n'ihi na ekwentị mkpanaka ahụ bụ oroma)
wee gbanyụọ wee jiri kaadị vodafone.
Gbalịa ihu, mgbe ị nwere ike ịgwa m,
jisie ike, ka anyị gafee mkpịsị aka anyị… ..
Will ga-agwa m….
Otu ihe a na - eme m dịka Gambri n’agbanyeghi inwe otu HBOOT dị ka HBOOT0.93.0001, anyị ga - anwale ụzọ ọzọ.
Ahapụla m ọchịchọ m ma zuo oke belụsọ na ọ naghị enye m netwọkụ ịntanetị, mmadụ nwere ike ịkọwa
Kedu ka ị si hapụ ya? n'otu uzo dika mu, ma obu olee otu ??
Ọ ga-amasị m ịmata ma ọ na-arụ ọrụ na htc ọchịchọ HD .A9191.
Nke ahụ bụ HBOOT 0.93.1000.
na ke a redio 5.14.05.17
na ke Root na S-Off no.
Ugbu a, m nwalere ya na HTC Desiree site na redio ndị a na HBOOT na FUCIONAAA !!!!
Teix ị nwere ike izipu m nzọụkwụ site na otu ị si tọhapụ ya ebe m na-enweghị ike na m nwere otu ụkpụrụ dị ka ị si hboot redio
OLA gbaghara maka nleghara anya xD mana enwerem nsogbu, kedu ka m ga esi mepee hboot? Kedu ihe ọ bụ? Enwere m ya, enwere m ike ibudata nke a na ekwentị ma ọ bụ olee otu?
Ọ dị mma m chọrọ ịma ma ọ na - arụ ọrụ na HTC DESIRE S ma gbaghara amaghị ama mana ọ bụ ekwentị dị iche karịa nke a
Echere m na m na-arahụ ma mgbe m na-etinye ntụtụ ọ na-ekwu: network-egbochi na ọ na-ajụ m maka puk na enweghị m ya. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Zaghachi na Truxy_beatbox
Agbalịrị m ya ma ọ dị m mma. Enwere naanị otu ihe na-ewute m, mgbe m tinyere sim na onye ọrụ ọzọ nke na-abụghị nke m nwere na mbụ (oroma) ọ pụtara m na ejikọrọ m na-agagharị. Amaghị m ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe nkịtị, ma ọ bụ na enwere nsogbu
Laura mara mma dijo
Ọ ga-amasị m ịmara otu ihe: ọ bụrụ na nhapụ ahapụghị nke ọma, a ga-egbochi ya?
PS: Nhapụ a abụghị nke IMEI, ọ bụ ya?
Zaghachi Laura mara mma
Ndewo, a tọhapụrụ m ọchịchọ m ma ọ naghị enweta 3G mkpuchi, onye nwere ike inye m azịza? Daalụ nke ukwuu.
Etu ị si akwụ ụgwọ ya
Agbalịrị m iji Orange HTC Desire m wee gbaghee ya na nnwale nke abụọ. Enweghi m mkpuchi 3G, ma n'oge a mmemme m niile na-arụ ọrụ, anyị ga-ahụ n'ime ụbọchị ole na ole ka ihe niile si aga.
OT I M Mere:
Ebe ọ bụ na Windows 7 enweghị m ike ịgbanye ngwa ahụ, yabụ, ebudatara m ihe onyonyo ISO, gaa na igwe akụrụngwa m (VirtualBox), gbara ya wee gwa m ka m jikọọ ekwentị ahụ, emere m, pịa igodo ... ma ọ nweghị, echere m ga-amalitegharia ọnụ ma ọ naghị, yabụ m kwụsịrị ya, nwaa ọzọ, na oge a ọ rụrụ ọrụ. Anụla m banyere ndị mmadụ ga-anwale ya ruo ugboro isii ma ọ bụ asaa, yabụ nwee obi ume.
Aza onye obula
Jl Elektrọnọstore dijo
adabaghị maka htc ọchịchọ hd, ọ na-arụ ọrụ maka agụụ na ihe uche ... 🙁
Zaghachi Jl Electronicstore
mana a ghaghi ime usoro a na sim na sd tinye ma obu na enweghi ha abuo?
ya na sim di iche na nke ndi edenye? Echere m ma ọ bụrụ na ekwentị bụ oroma na ịchọrọ ịgbanwe na pepephone ị ga-abanye pepephone?
esi amata hbot na redio?
Ndewo, Achọrọ m ịza ajụjụ na mdekọtara ihe oyiyi na eriri USB na ọrụ Unetbootin; Amalitere m PC na USB, agbanyeghị na o nyere m njehie, ewepụtara m ekwentị ahụ na nke mbụ ya. Agbalịrị m ịtinye kaadị SIM ahụ ma ọ bụrụ na ọ pụta na ihe niile zuru oke.
Nwere ike X Biko zitere m X EMAIL PROGRAM KA MGBE. HTC chọrọ XK m gbalịrị ibudata ya na njikọ ahụ adịghịzi adị ma ọ bụ ngwa ngwa ịhapụ ya site na mgbe ọ bụla ị ga-ekele gị nke ukwuu PELISCAFO1@HOTMAIL.COM
Ndewo m ga-achọ ịma X Biko Ọ B IFR YOU Ọ bụrụ na ị nwere ike iziga m mmemme a ma zigara m XK taa nke njikọ ahụ si na ọrụ ọ bụla na ihe niile kwuru na ọ na-arụ ọrụ kemgbe ị gara PELISCAFO@1HOTMAIL.COM Enwere m olile anya na unu abughi ma unu ekelela unu
Kedu ka m ga - esi edozi ma ọ bụrụ na m nwere HBOOT 0.93.1000 na redio 5.14.05.1?
Zaghachi Regina Moretto
Chei! Ọ ga-amasị m ịme ka mmemme ahụ mmadụ nwere ike izitere m eske na peeji nke xda adịghịzi ebe ahụ, eskerrik asko !!! Daalụ nke ukwuu (ps: abụ nke Libre site n'aka Berri Txarrak na vidiyo dị ezigbo mma!) Email m: goiku1985@hotmail.com na eskerrik asko ọzọ
Nwara na hboot 0.93.0001 na redio 5.11.05.27. Agbachi mgbe mbụ 😉
Zaghachi to elrichal
Na-arụ ọrụ na Hboot 6 93 1002 na redio 5 11 05 14
kedu ka m ga esi emelite redio
Kedu otu m ga-esi kpọghee HTC Desire C nke nwere HBOOT-1.31.000 na RADIO-1.10.98.15 na onye na-eweta sitere na Claro-Peru?